भुवन केसीलाई मनपर्ने पाँच पात्र’ कोको हुन् त ? हेर्नुहोस् – ramechhapkhabar.com
भुवन केसीलाई मनपर्ने पाँच पात्र’ कोको हुन् त ? हेर्नुहोस्
काठमाडाैं- नेपाली फिल्म क्षेत्रका लागि घर बेच्‍नसमेत पछि नपर्ने कलाकार हुन् नायक भुवन केसी। उनको अभिनययात्राले करिब चार दशक पार गर्न लागिसकेको छ। अहिले छोरा अनमोल केसीले अभिनय यात्रामा उनको बिँडो धानिरहेका छन्। भुवन भने अभिनय छाडेर निर्माण र निर्देशनमा लागिपरेका छन्।
फिल्म ‘जुनी’बाट यस क्षेत्रमा प्रवेश गरेका भुवनले थुप्रै हिट फिल्म दिए। कुसुमे रुमाल, सम्झना, चिनो, साइनो, करोडपति, नेपाली बाबुलगायतले उनलाई सफलताको चुलीमा पुर्‍याए। यी फिल्म दर्शकले मन पराए। उनको चरित्रलाई मन पराए। तर, स्वयं भुवनलाई मनपर्ने फिल्मको पात्र कुन होला त? हालसम्मका मनपर्ने पाँच पात्रबारे नेपाललाइभले जिज्ञासा राखेपछि भुवनले चर्चा गरेका पाँच पात्र:
‘कन्यादान’का विशाल डाक्टर
भुवनले अभिनय गरेका धेरै फिल्ममध्ये कन्यादानको विशाल डाक्टर उनको सबैभन्दा मनपर्ने पात्र हो। उनले यस फिल्ममा चिकित्सकको भूमिका निर्वाह गरेका थिए। प्रकाश थापाले निर्देशन गरेको फिल्ममा भुवनसँगै गौरी मल्ल, सुभद्रा अधिकारीलगायतको मुख्य अभिनय छ। ३१ वर्षअघि बनेको यो फिल्ममा विधवा युवतीको प्रेम र समाजले हेर्ने दृष्टिकोण देखाउन खोजिएको छ।
फिल्मका डाक्टर विशाल अर्थात् भुवनले बालविवाह र युवावस्थामै विधवाको जिन्दगी बिताएकी युवतीलाई मन मात्रै पराउँदैनन्, समाजसँग विद्रोह गरेर विवाह नै गर्छन्। फिल्ममा मनोरञ्‍जनसँगै समाज परिवर्तनका लागि उज्यालो छर्ने काम गरेकाले आफूलाई विशाल डाक्टरको भूमिका मनपर्ने उनले बताए।
‘सम्झना’का म्यानेजर भुवन र सुदीप
भुवनलाई मनपर्ने अर्को पात्र हो- सम्झना फिल्मको म्यानेजर भुवन। यो फिल्ममा भुवनले बाबु-छोरा दुवैको भूमिका निर्वाह गरेका छन्। भर्खरका छोरा र ६० वर्ष नाघेका बाबुको भूमिका २३ वर्षका भुवनले एकैचोटी निर्वाह गरेका थिए।
अहिलेजस्तो सजिलो प्रविधि त्यो बेलामा थिएन। त्यस्तो अवस्थामा दुईवटा भूमिका निर्वाह गर्नु निकै चुनौतीको काम भएको भुवनको अनुभव छ। उनले फिल्ममा छोरा सुदीप र बाबु भुवनको भूमिका निभाएका थिए। उनलाई यी दुवै पात्र बलिया लाग्छन्। साथै, मन पनि पराउँछन्। फिल्ममा नयाँ पुस्ता र पुरानो पुस्ताको भिन्‍नता देखाउन खोजिएको छ।
‘कुसुमे रुमाल’का अर्जुन
निकै चर्चा कमाएको सफल फिल्म हो कुसुमे रुमाल। त्यसैले पनि भुवनलाई अहिलेको स्थानमा ल्याउने फिल्मको पात्र अर्जुन मन नपर्ने कुरै भएन।
उनले पहिलो फिल्म ‘जुनी’बाट खासै चर्चा कमाउन सकेका थिएनन्। कुसुमे रुमालकै कारण उनी रातारात सबैका हृदयमा बस्‍न सफल भए। तर, कुसुमे रुमालमा धनी केटीलाई मन पराएको भ्रममा पर्ने अर्जुनले नै उनलाई सफलता दिलायो।
नेपाली फिल्म मन पराउने सबैलाई कुसुमे रुमालको अर्जुन पात्र त थाहै छ। फिल्ममा चर्चित गायक उदितनारायण र भुवनले एउटै केटी तृप्तीलाई मन पराएका हुन्छन्। फिल्ममा उदित र तृप्तीको तुलनामा भुवनको भूमिका कम छ, तर एउटा निकै चर्चित गीत ‘मायाको बारीमा पिरती हैन प्रितिको फूल…’ गीतले नै उनलाई चर्चामा ल्यायो।
‘करोडपति’का मेकानिक राजु
भुवनलाई प्रिय लाग्‍ने अर्को पात्र हो, करोडपति फिल्मको राजु मेकानिक। धनी बन्‍ने सोच बोकेका मध्यमवर्गीय युवा हुन् राजु मेकानिक। उनी धनी बन्‍नका लागि झुटको सहारा लिन्छन्। धनी भएको अभिनय गरेर युवतीलाई प्रेममा पार्छन्। तर, सत्य बताउनेबित्तिकै उनको हातबाट सबै कुरा खोसिन्छ। फिल्ममा साँचो प्रेमका लागि धनी हुन जरुरी छैन भन्‍ने कुरा देखाउन खोजिएको छ। फिल्मले व्यावहारिक सन्देश दिने भएकाले राजु मेकानिक भुवनका लागि मनपर्ने पात्र हुन्।
‘तँ त साह्रै बिग्रिस नि बद्री’का कान्छा श्रीमान् चन्द्रे
भुवनले सन्देश फैलाउने धेरै फिल्ममा अभिनय गरेका छन्। त्यस्तै, नारी सशक्तीकरणको कुरा उठाएको फिल्म ‘तँ त साह्रै बिग्रिस् नि बद्री’ मा उनले जँड्याहा चन्द्रेको भूमिका निभाएका छन्।
हास्यकलाकार हरिवंश आचार्यले निर्माण गरेको फिल्ममा कान्छी ल्याएर जेठी श्रीमतीलाई घरबाट निकाला गरिदिन्छ। कान्छी श्रीमती ल्याउने भूमिकामा हरिवंश अर्थात् बद्री छन् भने श्रीमतीले रोजेका कान्छा श्रीमान् चन्द्रेको भूमिका भुवनले निर्वाह गरेका छन्। यसमा आफूले नारीलाई सशक्त बन्‍न सघाउने भूमिका निर्वाह गरेकाले यो पात्र मनपर्ने भूवनले बताए।
यीबाहेक उनलाई निकै मनपर्ने अन्य पात्रमा साइनो फिल्मको आकाश पनि हो। जसमा उनले नायक हैन, खलनायकको भूमिका निर्वाह गरेका छन्।